रुस-युक्रेन युद्धले विश्वमै गम्भिर परिवर्तन ल्याउने चार संकेत :: NepalPlus
पिटर बर्न्स२०७८ चैत २४ गते १५:४६
Image credit- Screen shot via worldatlas.com
अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्डलाई कहिल्यै पनि महान् दूरदर्शी मानिएको थिएन । तर उनको एउटा उद्धरण छ जसले पौराणिक बचन साबित गरेको छ।
“त्यहाँ ज्ञात कुराहरु छन् । हामीले थाहा पाएका कुराहरू छन् । हामीलाई थाहा छ अज्ञात कुराहरू पनि छन् । यसको मतलब हामीलाई थाहा छैन त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छैन । तर त्यहाँ अज्ञात अज्ञातहरू पनि छन् । जुन कुरा हामीलाई थाहा छैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन”-डोनाल्ड रम्सफेल्ड
अनजानमा पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिवले संसारको बारेमा एउटा ठूलो तथ्य खुलासा गरे । हामीलाई थाहा नभएका धेरै कुराहरू छन् त्यसमा ।
यी अज्ञात अज्ञातहरू मध्येमै भविष्य छ । यदि तपाइँको टेबलमा महँगो धातुकै बल बसिरहेको छ भनेपनि तपाइँ आगामी वर्षहरुमा त्यो बल के हुनेछ भन्ने बारेमा अनजान हुनुहुन्छ।
यद्यपि, यदि तपाइँ राम्रो पर्यवेक्षक हुनुहुन्छ भने तपाइँ सधैं केहि तथ्य लिन सक्नुहुन्छ । त्यहाँ कमजोर संकेत र ढाँचाहरू हुन्छन् जसले आफैलाई चाँडै प्रकट गर्न थाल्छन् । कमजोर संकेतहरू साना प्रवृतिहरू हुन् । प्रायः राडार मुनि बसेका जस्ता । सम्भावित परिवर्तनहरूको अगाडि बसेका । ढाँचाहरू निश्चित घटनाहरूद्वारा आकार दिईने सुक्ष्म परिवर्तनहरू हुन् ।
त्यहाँ एक उदीयमान अनुशासन छ जसलाई दूरदर्शिता भनिन्छ । त्यसले यी कमजोर संकेत र ढाँचाहरू बुझ्ने प्रयास गर्दछ । त्यसपछि भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ, बदलिन्छ भन्ने निश्चित सम्भावित परिदृश्यहरू ल्याउनको लागि तिनीहरूलाई सहयोगिको रूपमा प्रयोग गर्दछ ।
हालैका दिनहरूमा युक्रेन वरपरका सबै बिभिन्न घटनाक्रमहरू पछ्याउँदै, मैले द्वन्द्वबाट बाहिर आउने केही कमजोर संकेतहरू लिन थालेको छु । यी मध्ये केहीले अलिकति चलखेल गरेको जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यहाँ केही तथ्यहरु अझै पनि राडार मुन्तिर छन् । तर धेरै कम मानिसहरूले तिनीहरूलाई याद गरेका छन् ।
मैले उठाएका केही चीजहरू यहाँ छन्। म केहि स्पष्टसँग सुरु गर्छु । र धेरै पर्यवेक्षकहरूले वास्तवमा विचार नगरेका केहि आला तथ्यहरु दिने छु ।
युद्धको प्रकृति परिवर्तन हुँदै
मैले ट्विटरमा युक्रेनमा रूसी आक्रमणको बारेमा समाचारहरू पछ्याउँदै छु । त्यहाँ साझा गरिएका धेरै भिडियोहरू मध्ये मैले एउटा भेटेँ जसले मलाई अविश्वसनीय रूपमा “भविष्यवादी” भनेर बुझ्न सहयोग गर्‍यो । यसले बाहिरबाट भिडियो सहितको स्क्रिन देखायो । फिल्डमा तपाईंले रूसी ट्याङ्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कसैले ट्याङ्कीमा औंला देखायो र ट्याङ्कीमा गोलीहरू हान्यो ।
अति यथार्थवादी लाग्थ्यो । म भिडियो गेम हेर्दै छु जस्तो लाग्ने । यद्यपि, यो वास्तविक थियो । युक्रेनी बिटि आर-४ वाहक सशस्त्र कर्मचारी भित्रबाट छोटो रेकर्डिङ गर्दै थियो । युक्रेनीहरूसँग भएका धेरै सवारीहरू मध्ये एक हो, र खार्किभको कारखानामा बनाइएको थियो। तिनीहरूले प्रयोग गरिरहेको प्रणाली युक्रेनी-निर्मित स्टुङ्ना-पि थियो। कसैले भिडियो गेम खेलिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। अविश्वसनीय लाग्ने !
यो युद्धको भविष्य हुनसक्छ । अबका वर्षहरूमा गाडीभित्र बसेर गोली चलाउने कोही ब्यक्तिको आवश्यकता पनि नपर्ला भन्ने कल्पना गर्छु । यो प्रहार टाढैबाट गर्न सकिन्छ। ड्रोन जस्तै ।
यो नागोर्नो-काराबाखमा २०२० को युद्ध थियो जसले भविष्यको युद्धभूमिमा ड्रोनहरू कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुनेछ भनेर देखाएको थियो । अजेरीहरूले आर्मेनियाली स्थानहरूमा आक्रमण गरे । पहिले आर्मेनियालीहरू बलियो पार्टी भए पनि यस पटक अजरहरू नयाँ हतियार लिएर बाहिर आए । टर्कीमा निर्मित बेराक्तार ड्रोनसहित । त्यसपछि आकाशबाट मृत्युको वर्षा भयो । युक्रेनीहरूले यो देखे । र तुरुन्तै बेराक्तार र अन्य ड्रोनहरू आफ्नो शस्त्रागारमा समावेश गरे ।
यो सकारात्मक वा नकारात्मक कुन प्रवृत्ति हो भन्ने निश्चित छैन । यद्यपि यसले केहि मात्रामा सिपाहीहरूको जीवन बचाउन सक्छ । यसले युद्धलाई बेवास्ता गर्न पनि सक्छ । युद्ध अपराध गर्न धेरै सजिलो छ जब तपाईं आफूबाट पीडितहरूलाई आँखामा देख्नुहुन्न र टाढा बस्नुहुन्छ ।
अहिले सबैसँग स्मार्टफोन छ । भिडियो खिच्न र त्यसपछि नेटमा अपलोड गर्न केही सेकेन्ड मात्र लाग्छ । युक्रेन युद्ध पहिलो प्रमुख टिकटक, ट्विटर युद्धको रूपमा परिणत हुँदैछ । यति धेरै फुटेजहरू अनलाइन अपलोड भइरहेका छन् ।
युद्ध अहिले युद्धभूमिमा मात्र होइन कम्प्युटर स्क्रिनमा पनि लडिएको छ । हामी ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स भनेर चिनिनेको आगमन देखिरहेका छौं ।
यो जानकारी र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध स्रोतहरू प्रयोग गरी भूमिमा के भइरहेको छ भनेर निगरानी र तथ्य जाँच गर्ने बारे हो । यी स्रोतहरूमा ट्विटर, यूट्यूबमा भिडियोहरू, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा पोस्ट गरिएका फोटोहरू र तिनीहरूलाई गुगल नक्सा जस्ता अन्य उपकरणहरूसँग संयोजन गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि, फेसबुकमा पोस्ट गरिएको तस्बिरबाट मेटाडेटा प्रयोग गरेर अन्य तस्बिरहरू र गुगल नक्साहरूसँग तस्बिरको सामग्रीको सहसम्बन्ध मिलाउन तपाईंले तस्विर कहिले र कहाँ लिइएको थियो भन्ने बारे एक राम्रो सभ्य विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसले बिभिन्न चीजहरूमा मद्दत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कुनै क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति पुष्टि गर्ने र दुबै पक्षले गरेका निश्चित दाबीहरू प्रमाणित वा अस्वीकार गर्ने । यो गलत जानकारीको पर्दाफास गर्नको लागि एक धेरै उपयोगी उपकरण हो । र रूसी नक्कली समाचारहरूमा बिएस लाई कल गर्नको लागि प्राय: प्रयोग गरिएको छ ।
संसारभरका मानिसहरूले म्यानुअल रूपमा यो धेरै प्रयोग गरेपनि । बढ्दो रुपमा देखिएका विभिन्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणहरू चित्रमा प्रवेश गर्दैछन् । उदाहरणका लागि एआई द्वन्द्वमा रूसी पक्षका लागि लडिरहेका निश्चित सैनिकहरू पहिचान गर्न प्रयोग गरिएको छ ।
यो धेरै क्षेत्रको लागि एकदम क्रान्तिकारी साबित भइरहेको छ । पत्रकारिता, युद्धक्षेत्र मूल्याङ्कन, युद्ध अपराध अनुसन्धान, प्रहरी अनुसन्धान र अपराध लडाइँ यी सबै खुल्ला स्रोत खुफियाबाट लाभान्वित छन् ।
यद्यपि यो दोधारे तरवार हो । यी सबै माथिल्लो भागसँगै तल्लो भागहरू पनि आउँछन् । धेरै मानिसहरूले यी उपकरण र प्रविधिहरू महान उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । खतरा यो छ कि खराब मानिसहरूले तिनीहरूलाई राम्रो लाग्ने आफ्नै व्यक्तिहरूको लागि दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।
एउटा ठूलो जोखिम के भने यी प्रविधिहरू ए आइ सँग मिलेर एउटा यस्तो संसारमा लैजाँदैछन् जहाँ कुनै गोपनीयता बाँकी छैन । ठ्याक्कै उही उपकरण तपाईंमाथि जासुसी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
निकट भविष्यमा अन्नको अभाव
युक्रेन विश्वमा अनाजको प्राथमिक उत्पादकहरू मध्ये एक हो । यसको ठूलो प्रतिशत मध्य पूर्वमा जान्छ । लेबनानमा खाईने रोटी युक्रेनीबाट बन्ने हो । इजिप्ट ? युक्रेनी अनाज। यमन ? त्यो देशलाई संयुक्त राष्ट्रले दिएको धेरैजसो सहायता युक्रेनी अन्नबाट बनेको देखिन्छ ।
यो मध्य पूर्व मात्र होइन, युक्रेनी र रूसी गहुँको आयातमा निर्भर छ । अफ्रिका पनि त्यस्तै छ। विश्वको सबैभन्दा गरिब महादेशले आफ्नो आधा गहुँ ती दुई देशबाट आयात गर्दछ । केही ठाउँहरू जस्तै सोमालिया, वास्तवमा तिनीहरूको सबै अन्न युक्रेन र रूसबाट प्राप्त हुन्छ ।
गहुँको आपूर्ति घट्दै गएको छ र मूल्यले आकाश छोएको छ । यसको मतलब के हुन सक्छ ? पहिले नै युद्ध, आर्थिक समस्या र गरिबीले ग्रस्त क्षेत्रहरूको लागि थप समस्याहरू । मानवीय प्रकोप निम्तिन सम्भव छ । हामीले थप तनाव देख्न सक्छौं। युद्धहरू पनि हुनसक्छन् । युद्धले चिप्स उत्पादनलाई असर गर्नेछ, जुन पहिले नै तनावपूर्ण छ ।
म तपाईंलाई एउटा थोरै ज्ञात तथ्य बताउँछु । नियोन ग्याँसको विश्वव्यापी उत्पादनको लगभग आधा युक्रेनी कम्पनीहरूद्वारा गरिन्छ । एउटा मरिउपोलमा छ । अर्को ओडेसामा । यो किन महत्त्वपूर्ण छ ? चिप्सको उत्पादनमा प्रयोग हुने लेजरहरूको लागि नियोन ग्यास चाहिन्छ ।
त्यो संख्या अमेरिकाको लागि अझ खराब छ । अमेरिकामा चाहिने सेमीकन्डक्टर ग्रेड नियोन ग्यासको लगभग ९० प्रतिशत युक्रेनबाट जान्छ ।
अर्को फरक खाले चिप्स सबै उपकरणमा हुन्छ । कम्प्युटर, कार, धेरै दैनिक उत्पादनहरूमा । अर्थतन्त्रको भर्चुअलाइजेशन भनेको हामी तिनीहरूमा अत्यधिक निर्भर छौं ।
समस्या के भने विश्वले पहिले नै चिप्प अभावको सामना गरिरहेको छ । कोविड-१९ महामारीले चिप्सको माग बढायो । अब सबैलाई कम्प्युटर चाहिन्छ । र अनुमान गर्नुहोस् विश्वमा सबैभन्दा ठूलो चिप्स उत्पादक को हो ?
ताइवान ! सबैभन्दा उन्नत चिप्सको लगभग ९० प्रतिशत त्यो टापुमा बनाइन्छ । अब सोच्नुहोस् यदि चीनले आक्रमण गर्‍यो भने ? रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विश्वव्यापी प्रतिक्रियालाई चीनले नजिकबाट हेरिरहेको छ । यसले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र मान्दछ र पछिल्लो समय झन् आक्रामक बन्दै गएको छ। यदि पुटिनले आफ्नो आक्रामकताबाट बच्न व्यवस्थित गरेभने त्यसपछि ताइवान अर्को हुनसक्छ ।
इतिहासले हामीलाई के सिकाउँछ ?
विगतका घटनाहरूले हामीलाई सिकाउँछन्-साना परिवर्तनहरूले अक्सर ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । जब यो इतिहासको कुरो बन्छ त्यो पुतली प्रभाव बन्छ । अर्थात् सानो पिउसोबाट भयंकर बनेर बिभिन्न क्षेत्र पुग्ने ठूलो पुतली जस्तै । यी उड्ने कीराहरू मध्ये एउटाले आफ्नो पखेटा फटफटाउँछ । तपाईंले दुई हप्तापछि विश्वका आधा बाटो पार गरेर सहरहरूमा क्षेप्यास्त्र वर्षाए जसरि पुग्छन् ।
युक्रेनी अनाज वा युक्रेनी नियोन ग्यासको कमीले कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कसलाई थाहा छ ? पुटिनले अराजकता फैलाएका छन् । र अराजकतालाई सिद्धान्तले कब्जा गर्न थालेको छ । संसारभर ठूला परिवर्तनहरू भइरहेका छन् ।
केहि प्रवृतिहरू बिस्तारै समयसँगै निर्माण हुँदै गएका छन् । केही एकदम नयाँ छन् । मैले माथि वर्णन गरेका दुईवटा कुराहरू युद्धले अगाडि ल्याएका थिए । यद्यपि, दुई संकेतहरू युद्धको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न अगाडि नबढेको भए यी समस्याहरू हुने थिएनन्।
के चीजहरू नियन्त्रण बाहिर छरपस्ट होलान् ? यो सम्भव छ । इतिहासका नराम्रा घटनाहरू एकअर्का माथि थुप्रिएको दुष्ट चक्रको परिणाम हुन् । साना कारकहरूले विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउँछन् । आशा गरौं कि हामी त्यो बाटोमा जाँदैनौं ।
(मेडियम डट कमको आलेखलाई नेपालीमा भावानुवाद गरिएको-संपादक)